juin | 2019 | InfoKmada
Olana Air Mad – Air France : ny 2 Jolay izao ny fotoam-pitsarana manaraka
InfoKmada - 28 juin 2019 0
Mikasika ny olana misy eo amin’i Air Madagascar sy Air France. Ny 02 Jolay izao no hanantanterahana ny fotoam-pitsarana faha 4 eo anivon’ny tribonalin’ny varotra any Paris. Vola maherin’ny 50 tapitrisa dolara no takian’I Air France amin’ny Air Madagascar.
Kodiaran-droa voizina : mivadika herinaratra
Azo avadika ho herinaratra ny fivoizana kodiaran-droa. Ankoatry ny herinaratra anefa, mitondra vokatsoa ho an’ny fahasalamana ihany koa izany. Hatreto, mijanona ho famoronana fotsiny ihany izany ho an’ireo mpianatra namorona.
Fahadiovan’ny tanàna vita fety : miaina ao anaty loto sy fofona ny vahoaka
Fofona maimbo sy fako miparitaka no hita teny amin'ireo toerana nanaovana fety sy fampiratiana nandritran'ny fankalazana ny fetim-pirenena. Mitaraina vokatr'izany ireo vahoaka ary mitaky ny fandraisan'andrakitry ny CUA.
Fifanosehina teny Mahamasina : alina dia efa nitsidika teny ny Filoha
Alina taorian’ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety nataon’ny Filohan’ny Repoblika Malagasy sy ny Filohan’i Rwanda teny amin’ny Lapàn’Iavoloha dia nitsidika ireo niaram-boina tao amin’ny Hopitaly Ravoahangy vokaty ny fifanosehana teny Mahamasina ny Filoha RAJOELINA Andry mivady sy ny Praiminisitra ary mpikambana vitsivitsy ao amin’ny governemanta.
Fifanosehana teny Mahamasina : 16 no maty, 38 mbola manohy ny fitsaboana
16 ny maty vokatry ny fifanosehana teny Mahamasina omaly raha ny antontan’isa farany teny anivon’ny HJRA. Raha toa ka 38 no mbola tazonina eny antoerana ankehitriny, misy amin’izy ireo no mbola tsy fantatry ny fianakaviany.
RAJOELINA Andry : Tsara alaina tahaka ny ezaka vitan’i Rwanda
Tsara alaintsika Malagasy tahaka ny ezaka vitan’i Rwanda, ka nahatonga azy ho isan’ireo fiurenena misandratra aty amin’ny kaontinanta Afrikanina ankehitriny, hoy ny Filoha RAJOELINA Andry nandritra ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety nataon’ny Filoha RAJOELINA Andry sy ny Filoha Rwandais Paul Kagamé alina teny amin’ny Lapàm-panjakana Iavoloha.
Matso 26 jona 2019 : fitaovana arifomba no nalahatra
InfoKmada - 27 juin 2019 0
26 Jona 1960 -26 Jona 2019. 59 taona nahazoan’i Madagasikara ny fahaleovantenany. Niavaka ny fanamarihana izany tamin’ity taona ity. Niavaka ny fitaovana nentina naneho fa miady amin’ny tsy fandriampahalemana ny foloalindahy malagasy .
26 jona : niavaka ny fankalazana ny faha 59 taona niverenan’ny fahaleovantena
Niavaka ny fankalazana ny faha 59 taona niverenan'ny fahaleovan-tena ho an'ny faritra ivelan'Antananarivo renivohitra androany. Matso, fety sy fiaraha-mifaly ao anatin'ny filaminana tanteraka no hita.
Paul KAGAME : tonga tamin’ny 11 ora sy 25 minitra
Tamin’ny 11 ora sy 25 minitra no tonga tetsy IVATO ny filohan’ny Repoblikan’i Rwanda Paul KAGAME. Ny filohan’ny Repoblika mivady niaraka tamin’ireo mpikambana anivon’ny governermanta notarihin’ny Praiminisitra NTSAY Chrisitian no nitsena azy teny an-toerana.
Kabary 26 jona : nomem-boninahitra ny foloalindahy
Tsy tahaky ny isan- taona, nomena ny minisiteran'ny fiarovam- pirenena ny fanaovana ny kabary ofisialy ho an'ny vahoaka malagasy izay fanaon'ny filohampirenena amin'ny maha fetin'ny foloalindahy ny fetin'ny fiverenan'ny fahaleovantena Malagasy. Nambaran'ny minisitry ny fiarovam- pirenena tao anatin' izany fa mila ny fanomezan- tanana avy amin'ny tsirairay izy ireo ho fanatanterahana ny fanamby.